काठमाडौंमा लौरो विजयी भएसँगै खुसियाली ! - Info Nepal
INFONPLसमाचारकाठमाडौंमा लौरो विजयी भएसँगै खुसियाली !
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा लौरो चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका बालेन्द्र शाहले अग्रता लिइरहँदा काठमाडौं जिल्लाभित्रै लौरो चुनाब चिन्हका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
याे पनि, कुनै बेला निकै चर्चामा आएकी छेकी शेर्पा अहिले भने दुई जुम्ल्याहा छोरा जन्माएर कोठामा बस्दै आएकी छिन । कमल भुजेलसगँ बिबाह गरेकी छेकी शेर्पा अहिले साथमा श्रीमान नहुदाँ दुई बच्चालाई हुर्काउँन निकै गार्हाे भएको बताउँछिन । कमल भने केहि महिनादेखी कामको शिलशिलामा बाहिरै बस्दै आएका छन । अहिले आफुलाई दुई छोराको स्याहार गर्न निकै मुस्किल परि रहेकाे उनी बताउँछिन ।
दुई जनालाई आ`फ्नो दु`धले नपुग्ने भएकोले गर्दा पनि बाहिरबाट किनेर ल्याउन आर्थिक अवस्थाका कारण गार्हाे भएको बताउँछिन । पहिले त सबैले सहयोग गरिदिनु भएकोले ल्याक्टिजिन लगायत ल्याएर खुवाउने गरेको भएता पनि अहिले भने गाईको दिनहु एक लिटर ल्याएर खुवाउने गरेको उनले बताईन ।
जन्मिएको करिव १ वर्ष पछि सामान्यतया बच्चाहरु बोल्ने गर्दछन । तर छेकिका यी दुई जुम्ल्याहा छोराहरु भने अहिले ३ महिना मात्र पुगेका छन । तर उनिहरु सामान्य कुराहरु बोल्न थालेको उनले बताईन । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले पनि अहिले निकै समस्या भएको सबैतिर उधारो रहेको छेकिले बताईन । बाँकि याे भिडियाे रिपोर्टमा हेर्नुस्:-